चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवीको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्यष्टी (भिडियोसहित)
गत शनिबार निधन भएकी चर्चित भारतीय अभिनेत्री श्रीदेवीको बुधबार राजकीय सम्मानका साथ अन्त्यष्टी गरिएको छ । भारतीय शहर मुम्बइमा उहाँलाई हजारौँ प्रशंसकले अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेपछि अन्त्यष्टी गरिएको हो । अन्त्यष्टीपूर्व निकालिएको शवयात्रामा हजारौँ प्रशंसक सहभागी भएका थिए ।
विशेष रूपमा सिङ्गारिएको एउटा ट्रकमा राखेर उहाँको शवलाई सात किलोमिटर टाढा रहेको अन्त्येष्टि स्थलमा लगिएको थियो । शवयात्राका कारण लामो समय मुम्बईको सडकमा ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको थियो भने अन्त्यष्टीस्थलसम्म पुग्न झण्डै दुई घण्टा लागेको थियो । दुबईको अस्पतालले पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिन ढिला गरेपछि उहाँको पार्थिव शरीरलाई मङ्गलबार अबेर राति मात्र दुबईबाट मुम्बई ल्याइएको थियो । सोमबार दुबई सरकारले बलिउडकी चर्चित नायिका श्रीदेवीको मृत्यु दुर्घटनाबस ‘बाथ टब’मा डुबेर भएको जानकारी गराएको छ । आफन्तको वैवाहिक कार्यक्रममा सहभागी हुन ५४ वर्षीया श्रीदेवी संयुक्त अरब इमिरेट्स जानु भएको थियो । सन् २०१३ मा भारत सरकारले उहाँलाई देशकै चौँथो ठूलो नागरिक सम्मान पद्मश्रीबाट विभूषित गरेको थियो । श्रीदेवीले करिब तीन सय चलचित्रमा अभिनय गर्नुभएको छ ।
Posted by My Nepal TV (MNTV)- Australia on Wednesday, February 28, 2018
रिलिजको तेश्रो हप्तामा सुनकेशरी, शनिबार सिड्नी र आईतबार एडिलेडमा प्रदर्शन
सिड्नीको टाउन हाउसमा सप्तपरी फेशन शो आयोजना हुँदै, पूर्वमिसनेपालदेखि अभिनेत्रीसम्म र्याम्पमा
मायाको छुट्टै गीत, प्रज्वल राना भन्दैछन् जाउ फर्केर नआउ…!
सुनकेशरीको आज मेलबर्नमा दोश्रो शो, सिड्नीमा रेडकार्पेट प्रिमियर गरिँदै !
कवितालाई संगीततको साथ, किरणले दिए कवितालाई सांगीतिक जीवन
हरर विधामा सबैभन्दा बढी लगानीको पहिलो नेपाली चलचित्र सुनकेशरी शुक्रबार नेपालसँगै मेलबर्नमा पनि रिलिज हुने
सञ्जीव सिंहको ‘गोरी यता सुन न’को नयाँ भिडियो सार्वजनिक, ब्रिसबेनमा छायाँकन (Watch Video)
अष्ट्रेलिया निवासी गायक ईश्वर पोखरेलको गीतमा आकाश वर्षालाई कति बज्यो भनेर सोध्दै
खगेन्द्र लामिछानेको नयाँ प्रयोग डमरुको डन्डीवियो ६ मेमा मेलबर्नमा प्रदर्शन हुने
एडिलेड निवासी गायिका प्रजिताको व्यूटीफुल गर्ल, गिरिश खतिवडाको साथ